Bixitaanka Ciidamada AMISOM Ee Soomaaliya…Talaabo Waqtigeeda Ka Soo Hormartay (WARBIXIN). – Calamada.com
Bixitaanka Ciidamada AMISOM Ee Soomaaliya…Talaabo Waqtigeeda Ka Soo Hormartay (WARBIXIN).
calamada March 2, 2017 4 min read
Warbixintii ugu dambeysay ee hayâ€™adda The International Crisis Group ICG waxaa lagu yiri: Farmaajo wuxuu ka faaâ€™ideystay in uu iska dhigo qof loo arko hogaamiye saxan oo dhisaya ciidamo Qaran oo xoogleh, oo soo dadajinaya bixitaanka ciidamada AMISOM, xasilinaya wadanka, xadidaya faragelinta wadamada deriska ah, sidoo kalena ilaalin kara sharafta iyo madax-banaanida Soomaaliya.
“AMISOM kaligeed ma jabin karto Al-Shabaabâ€ ayaa lagu yiri warbixin sanadkii la soo dhaafay uu baahiyey machadka daraasaadka siyaasadda ee Heritage. “Tani waxay dhici kartaa haddii AMISOM ay garab iyo wada shaqeyn ka hesho ciidamo Soomaali oo awoodlehâ€ ayaa lagu yiri warbixinta.
Laakiin “ciidamada qaranka Soomaaliyaâ€ ayaa ah ciidan uu hareeyey dhibaatooyin badan oo uu ka mid yahay musuq-maasuqa, tabardarada iyo in aanan laga jecleen meelaha ka baxsan caasimada.
Francisco Madeira oo ah wakiilka gaarka ah ee midowga Africa u qaabilsan arimaha Soomaaliya ayaa Wakaaladda wararka ee IRIN u sheegay in ay ka warhayaan taxadiyaatkaas hortaagan dhismaha ciidanka Soomaaliya. “Dhisida awoodda ciidamada Soomaaliya waa mid udub dhexaad u ah howlgalka AMISOM ee Soomaaliya, waxaana arintaas ku bixineynaa awoodeena tan ugu wanaagsanâ€ ayuu yiri.
“Bixitaan ciidamada AMISOM ay baxaan sanadka 2020-ka wuxuu noqon doonaa mid waqtigiisa ka soo hormarayâ€ ayuu yiri: Christian Ani Ndubuisi oo ah baaxith ka tirsan machadka daraasaadka amniga.
Waxaa sidoo kale hadda jira dhibaato baâ€™an oo ka dhex taagan sufuufta dowladaha qeybta ka ah AMISOM kuwaas oo ku goodinayey in ay ciidamadooda la bixi doonaan Soomaaliya tan iyo markii midowga Yurub uu jartay labaatan boqolkiiba (20%) mushaarkii lagu bixin jiray ciidamada AMISOM bishii January ee sanadkii 2016-ka.
Marka midowga Africa uu ku calaacalayo in askartooda ay ku dhiigbaxayaan Soomaaliya, Reergalbeedkuna uu bixinayo lacag oo kaliya, waxaa midowga Yurub ay iyagana isku difaacayaan: “Waxaa jira howlgalo kale oo nabad ilaalin ah oo ka jira Qaarada oo u baahan taageero sida Afrikada dhexe, Mali iyo Chad.
“AMISOM waxay sanadkan u dabaal degi doontaa sanadkeedii tobnaad. Midowga Yurub oo ah Maalgeliyaha ugu weyn ee duulaanka Soomaaliya-na ma hayo wax natiijo ah, mana arko iftiinka Kanaalkii la qodayey tobankii sano ee la soo dhaafayâ€ sidaas waxaa yiri Thierry Vircoulon oo ah Agaasimaha Bartamaha Africa ee hayâ€™adda ICG. “Midowga Yurub hadda diyaar uma ahan in uu maalgeliyo howlgal kale oo nabad ilaalin oo aan dhamaad lahayn sida UN-ka oo kaleâ€ ayuu hadalkiisa sii raaciyey.
“Waan soo afjarnay qorshaha lagu soo celinayo meelihii ugu muhiimsanaa ee ay Al-Shabaab ka joogtay Soomaaliya gaar ahaan Jubada hoose sidaas darteed si howshan loo qabto waxaan u baahanahay ciidamo dheeraad ah oo nala qaban doona howshan muddo lix bilood oo kaliya, ka dibna aan ciidanka ku soo celino cadadkii uu ahaaâ€ ayuu yiri Madeira oo ah wakiilka midowga Africa ee Soomaaliya.
Previous: Weerar Xoog Ku Gal Ah Oo Ka Dhacay Magaalada Kaabul.
Next: Dhageyso Sheekh Xasan Yacquub Oo Ka Hadlay Xaalada Gobalka Galgaduud.